Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Nidaam Dowladeed Nooceebaa Ku Haboon Dadka Soomaaliyeed ?‏ Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Muqdisho:(A.M.Network)-Ka dib markii ay burburtay dowladd Dhexe ee Dalku lahaa,Waxaa soo baxayey aragtiyo kala duwan oo ku aadan nooca dowladnimo ee ku haboon dadka Soomaaliyeed ka dib dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.Dadka qaar waxa ay soo jeediyeen in la qaato nidaamka Federaalka (Federal System), Halka dadka qaarna ay doonayaa in lagu dhaqmo nidaamka dowladda dhexe (Central System).
Aragtiyooyinkan kala duwan ee ay kala qabaan Siyaasiyiinta iyo taageerayaashooda,Ayaa waxaa dhinac socda aragti kala oo ay qabaan Kooxaha Islaamiyiinta Soomaalida sida Al-shabab oo kale,Waxa ayna Kooxaha Islaamiyiinta qabaan in Soomaaliya laga dhiso nidaam Islaami ah, kaas oo aasaas u noqda dhismaha Khilaafa Islaami oo mar kale ka hanaqaadda Caalamka.
Qolyaha taageersan nidaamka Federaalism-ka ayaa ku doodayo in ay Soomaalidu is-dishay,Islamarkaana ay si xun u kala aamin baxday, Sidaa daraadeed nidaamka kaliya ee isku soo celin kara Maanta uu yahay nidaamka Federaalka.Qolyahan Federaal doonka ayaa aragtidooda ku saleeyey waxa Maanta taagan oo kaliya.Kooxdan ayaa halis ku ah Midnimada iyo Wadajirka Umadda Soomaaliyeed,Waxaana shaki iiga jirin in ay gadaal ka riixayso Xabashi iyo wax la mid ah..
Amma Qolyaha taageersan nidaamka dowladda dhexe (Central System), Waxa ay ku doodayaan in dadka Soomaaliyeed ay yihiin qoys wadaago Diin,Luuqad,iyo Dhaqan intuba, Sidaa daraadeena aan loo baahneyn nidaam sii kala fogeeya ama sii kala qeyb qeybiya.Waxa ay qolodan Central doonka ah ku andacoonayaan in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin cadowyo badan islamarkaana uu ka maqan yahay dhul ballaaran sidaa daraadeedna ay u baahan yihiin oo kaliya nidaam dhexe oo isku hayo islamarkaana u soo celiya dhulkooda maqan.
Hadaba haddii ay horyaalaan dadka Soomaaliyeed Labadan fikradood ama Labadan System ee kala duwan,Dalkanna uu ku yaalo goob muhiim ah(Staratijic Place), Caalamkiina uu ka jiro isbadalo badan oo halistooda leh, Sida in ay iskudhacaan dowladaha waaweyn oo kale,Hadaba su’aasha meesha taalaa waxaa weeye nidaam dowladeed nooceebaa ku haboon dadka Soomaaliyeed tirade yar ?
Anigu markaan muddo badan fikirayey Sidoo kalena aan fiiriyey xaaladda ay ku sugan tahay Umadda Soomaalideed, Sida kala qeybsanaanta dhexdeeda.Markaan fiiriyey dhibaatada loo maleegayo Umadda Soomaaliyeed gaar ahaan midda ay maleegayaan cadowgii soo jireeenka ahaa.Markaan fiiriyey isbadalada ka jira Caalamka, Waxaa ii soo baxday in nidaamka kaliya ee ku haboon Umadda Soomaaliyeed uu yahay nidaamka Centralka.
Maadaama aan wali la xaqiijinin aragtidii Soomaliweyn ee ahayd in la isu keeno Shantii Soomaaliyeed ee uu qeybiyey Gumeystihii qaashimka ahaa,Maadaama ay ay Soomaalidu daris la tahay Qabaa’ilo Africaan ah oo tiro badan sida Oromada,Amxaarada,Tikreeda,Kiikuuyada,iyo Wixii la mid ah,Hadaba waxaan leeyahay nidaamka Centralka waa midka kaliya ee difaaci kara dadka Soomaaliyeed, islamarkaana ilaalin kara dhulkan muhiimka ah.
Faa’iidooyinka uu leeyahay nidaamka Centralka waxaa ka mid ah in uu isku hayo Umadda, Islamarkaana uu si cadaalad ah ugu qeybiyo Kheyraadka dalka Iyadoo aan cidna la dulmineynin.Waxaa ka mid ah faa’iidooyinka nidaamkan inuu xoojiyo dowladda dhexe si ay u qaadato talaabooyin muhiim ah oo lagu hormariyo dalka,Iyadoo laga faa’iideysanayo Kheyraadkiisa.
Dhinaca kale faa’iida darada uu leeyahay nidaamka Federaalism-ka waxaa ka mid ah In uu daciifiyo dowladda dhexe, waxaana tusaale noogu filan waxa Maanta haysta Xasan Sheekh iyo Dowladdiisa,Tusaale kale waxaa noo ah, Sida ay uga jawaabeen Maamul Goboleedyada ka jira dalka dhacdadii Fooxh-xumeyd ee ka dhacday Xaafadda Islii ee Magaalada Nairob halkaas oo la waayey hal Maamul oo ka hadla dhibaatadii loo geystay Hooyooyinkii Soomaaliyeed.
Maadaama aan aragnay foolxumada uu leeyahay nidaamka Federaalismka iyo halista uu u leeyahay Midnimada iyo Wadajirka Umadda Soomaaliyeed.Maadaama aan aragnay sida ay Maamul goboleedyada u daciifiyeen awoodii ay lahayd Dowladdii Dhexe,Hadaba sow waajib naguma ahan inaan qaadano nidaam noo shaqeyn kara islamarkaana ilaalin kara danaheena ? Jawaabtu waa haa and haa.
Hadaba si aysan u dhicin mar kale wixii ay gaysatay Dowladda Dhexe ee Siyad Barre waa in aan la nimaadnaa aragtiyo cusub oo hago hanaanka dowladnimo si aysan mar danbe u burburin dowladnimadeena.Hadaba waxaan soo jeedinayaa talooyinkan soo socda waa haddii la qaadanayo.
1-In la qaato nidaamka dowlad dhexe (Central System) si loo helo dowlad Soomaaliyeed oo xoog leh.
2-In la sameeya dastuur cusub oo aan ka horimaaneynin danaha Umadda Umadda Soomaaliyeed gaar ahaan diinta iyo dhaqanka.
2-In dalku yeesho Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen si looga fogaado loolan xagga awoodda ah iyo waliba khilaafaad dastuuri ah.
3-In la diyaariyo siyaasaddii lagu dhisi lahaa ciidanka Dhulka,Cirka iyo Badda si loo helo cudud ciidan oo difaacda danaha Umadda Soomaaliyed.
4-In laga shaqeeyo sidii loo soo saari lahaa Jiilal aqoon leh islamarkaana wadaniyiin ah oo hogaamiya dalkan qiimaha badan.
5-In lagu qulaamiyo Jiilasha soo koroyo aragtida Soomaaliweyn ee ah sidii loo midayn lahaa Shantii Soomaaliyeed ee uu Gumeystuhu kala jaray.
6-In ay bilowdo Warbaahinta Soomaalida Barnaamijo ka hadlayo qiimaha Wadaniyadda iyo qiimaha aragtida Soomaaliweyn.
Maadaama aan ku jirno xaalad adag waa inaan helnaa aragti sax ah oo aan u gudbino dadka Soomaaliyeed si aan loogu mashquulinin waxyaabo aan dan u ahayn Umadda Soomaaliyeed.Maadaama ay jiraan dhinacyo Soomaali ah oo ka shaqeynayo kala goynta dalka,Islamarkaan ay jiraan kuwa kale oo Federaal doon ah waa inaan ka hortagnaa kuwaasi maangaabka ah ee qatarta ku ah jiritaankeena.
Gaba gabadii waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka waxgarad ah sida Culimada, Aqoonyahanada,Siyaasiyiinta iyo Haweenka in loo istaago sidii loo badbaadin lahaa dalkan, Islamarkaana loo heli lahaa dad wadaniyiin ah oo la loolama kooxahan gooni-goosadka iyo kuwa Federaal doonka ah.